Explore Odisha Tour Packages | Antsoy @: + 91-993.702.7574
India dia firenena iray mampihetsi-borona amin'ny toerana mahagaga hahafantarana, fa ao anatin'ny faritra tena mahavariana dia i Odisha any amin'ny faritra atsinanan'ny firenena akaikin'ny Bay of Bengal. Ho an'ireo mpizaha tany mpizahatany, Odisha - fantatra amin'ny anarana hoe Orissa hatramin'ny 2011 - dia manolotra fanamafisam-peo mahavariana amin'ireo fiarahamonim-pirenena, fiaramanidina fialantsasatra, ary tempoly manan-tantara tsara, tokony ho ao amin'ny lisitry ny bokinao i Odisha, ary afaka mamandrika vakansy miaraka amin'ny Odisha Tour Packages.
Odisha, any atsimon'ny faritanin'i Bengali Andrefana, dia manana tantara lava sy mahaliana ary koa kolontsaina maoderina sy manankarena. Nosoratana ao amin'ny bokin'ny tantara izay efa mihoatra ny roa arivo taona lasa izay, izay midika hoe toerana misy lavaka lava sy mahavariana izany, kanefa androany dia toerana manan-danja sy mahavariana izay mitombo haingana. Ny Odisha Tour Packages dia manampy anao hijery ny kely indrindra amin'ireo toerana tsy fahita
Isan-taona, Tourisme Odisha dia lasa malaza kokoa satria tonga maro kokoa ny mpitsidika manidina ao amin'ireo faritra mampiavaka ny faritra, manomboka amin'ny faratampony an-tanandehibe mankany amin'ireo tanàna mikorontana.
Androany, misy fomba maro mahavariana ahafahan'ny mpitsidika mianatra momba ny tantaran'i Odisha mahavariana. Ny sasany amin'ireo toerana tranainy indrindra ao amin'ny faritra dia ahitana ny sary hosodoko rock ao Gudahandi, izay heverina fa mihoatra ny 20,000 taona. Ny fandehanana ao anatin'ireo zohy ireo dia ny mandeha amin'ny dian-tongotry ny razantsika lavitra indrindra. Ny Pakanay Odisha Tour dia miantoka fa manana traikefa mandritra ny androm-piainana ianao.
Ity dia satria tranokala no porofon'ny sasany amin'ireo trangan-javatra tranainy indrindra amin'ny olombelona, ​​ary ny fitsidihana azy ireo amin'ny maha-mpizahatany an'i Odisha dia tena hahatsapa ny tantaran'ireo taona an'arivony izay mitrandraka ny faritra. Ireo tranonkala manan-danja hafa dia mbola vao haingana saingy tsy dia mampihetsi-po loatra - toy ny Tempoly mahatalanjona Konark Sun, izay malaza eran'izao tontolo izao noho ny rafitra mahatalanjona. Niorina tamin'ny taona 13th Century, na dia rava aza ny ampahany sasany amin'ny tempoly, dia mbola voatahiry ny ankamaroan'ireo sary sokitra tsara sy mahatalanjona indrindra. Izahay miaraka amin'ny Odisha Tour Packages dia hahafantatra ny tena dikan'ny hatsarana.